Ny fanontaniana momba ny tsy tokony hihetsi-jaza mandritra ny fitondrana vohoka, dia miteraka reny amin'ny hoavy maro, satria ny ankamaroan'ny vehivavy dia maniry ny mijanona ho tanora, tsara tarehy ary ara-pananahana mandritra ny fitondrana vohoka ary aorian'ny nateraky ny zaza.
Mba tsy hahazoana kilôbi loatra loatra eo am-piandrasana fiainana vaovao ary tsy miezaka ny manala azy ireo rehetra aorian'ny fahaterahana, ilaina ny manaraka ireo torohevitra mahasoa sasany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiteny aminareo izahay hoe ahoana no tsy hanangon-jotra mandritra ny fitondrana vohoka, ary inona no tokony hatao mba hihazonana endrika marevaka sy mahafinaritra.
Ireo reny izay tsy te ho tsara kokoa mandritra ny fitondrana vohoka dia tokony hanaraka izany torohevitra izany toy ny:
Ny fihinanana vehivavy iray amin'ny toerana "mahaliana" dia tokony hozaraina - 4-5 isaky ny andro amin'ny ampahany kely;
ao amin'ny sakafo isan'andro ho an'ny reny dia tokony hampiditra voankazo sy legioma vaovao, serealy, ary koa vokatra avy amin'ny vokatra;
Ankoatr'izay, mba tsy hisian'ny fatotra mandritra ny fitondrana vohoka, dia ilaina ny manaisotra ny vokatra toy ny: fanenoman-tsakafo sy ny siramamy, sakafo avy amin'ny voankazo, vokatra voamadinika, sakafo matavy amin'ny solika, sy ny sisa;
mandritra ny fotoana hiandrasana ny zazakely hifehy ny hormonina ao amin'ny vatana. Raha misy fiviliana manan-danja amin'ny endriky ny endriky ny soatoavina ara-dalàna, dia ilaina ny mandray ny fanafody fitsaboana omen'ny dokotera;
Amin'ny farany, ireo reny amin'ny hoavy izay manahy ny amin'ny fanontaniana hoe ahoana no tsy tokony hananana fatin'olona mandritra ny fitondrana vohoka dia tokony hifantoka manokana amin'ny asa atao amin'ny vatana.
Mandritra izany fotoana izany, tsy ny karazany rehetra dia mety ho an'ny vehivavy amin'ny toerana "mahaliana". Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fahasalaman'ny renim-pianakaviana sy ny zanany hoavy dia ny milomano, yoga, aqua aqua ary mandeha an-tongotra. Ankoatr'izay dia tokony ho tsaroana fa amin'ny toe-javatra sasany, ny fikarakarana ara-batana amin'ny fitondrana vohoka dia mifanohitra amin'izany, koa alohan'ny hanombohanao dia tokony hifantoka amin'ny dokotera foana ianao.
Inona no horaisina any amin'ny hopitaly?
Fanafoanana ny maraina taorian'ny fitondrana vohoka
Belly nandritra ny herinandro 16 herinandro
Pimafucine amin'ny fahaterahana
Analgesia aorian'ny bevohoka mafy
Firaisana amin'ny vehivavy bevohoka
Afaka mahazo abrisika amin'ny vehivavy bevohoka ve aho?
Ny endriky ny loko amin'ny olona iray
Dada dia nanoratra ny zanany Instagram ary efa nanangona indroa isaky ny mpanjifany!
Ny fahakelezan'ny postpartum - ahoana no hiadiana?
Ahoana no anaovana ny cystographie amin'ny ankizy?
Ny Park Harry Potter
Charlotte miaraka amin'ny abriko - ireo karazan-tsakafo mahafinaritra indrindra ao an-trano
Rahoviana no miseho ny nify voalohany?
Ahoana ny fijery 3D amin'ny fahitalavitra?
Fiomanana amin'ny fitondran-tena
Sakafo Mofo - tsotsotra tsotra
Ahoana ny fomba handraisana biscuit rolls?